विर्सिएका हिरो थिन्लेः हार्दिक श्रद्धासुमन ! मिठो सम्झना « Jaitoon Online
विर्सिएका हिरो थिन्लेः हार्दिक श्रद्धासुमन ! मिठो सम्झना
जैतुन अनलाइन | १२ बैशाख २०७७, शुक्रबार
बैशाख बाह्र, नेपालमा विनाशकारी भुकम्प गएको दिन, २०७३ सालको बैशाख १२ गते एक वर्ष अगाडी गएको भुकम्पको पहिलो वार्षिकि थियो, हो त्यही दिन थिन्लेको पनि निधन भएको दिन । थिन्ले उनको पुरा नाम थिन्ले लुन्डुप लामा हो । घरगाउँमा उनलाई धेरैजसोले त्हावे म्हेमे भनेर बोलाउने गर्थे । डोल्पा जिल्लाको साल्दाङ्ग गाउँका स्थायीवासि थिन्ले नेपाली सिनेजगतको जनजिब्रोमा झुन्डिएको नाम हो अर्थात परिचित नाम हो । किनकि ओस्कारका नामले परिचित एकेडेमी अवार्डमा नेपालबाट पहिलो पटक मनोनयनमा परेको चलचित्र हिमालय (क्याराभान) का नायक हुन् थिन्ले । फ्रान्सेली नागरीक एरिक भ्यालीले निर्देशन गरेको उक्त चलचित्रले सन् २००० मा एकेडेमि अवार्ड फर फरेन फिल्मको ताज जित्न सफल भएको थियो । यही विश्व चर्चित नेपाली चलचित्रका नायक थिन्ले काठमाडौंमा आफ्नो उपचार गरी दुनैबाट घर जाने क्रममा फोक्सुण्डोको बाटोमा घोडाबाट खसेर उनको निधन भएको थियो । ७२ वर्षको उमेरमा उनको एक दुर्घटनामा निधन भएको थियो । आज २०७७ बैशाख १२ उनै चर्चित नायक डोल्पाली थिन्लेको चौथो स्मृति दिवस हो । हुन त उनलाई आज कत्तिले सम्झे पनि होलान् तर खासमा जसले डोल्पा र नेपाल लाई विश्व चलचित्र जगतमा चिनायो त्यसलाई के साँचो अर्थमा हामीले सम्झेका छौं त ? के उनको योगदानको मुल्याङ्कन भएको छ ? वा उनी हाम्रा लागि सम्झनायोग्य पात्र हुन् वा होइनन् ? प्रश्न बनेको छ ।
उनको                    (जन्म घर साल्दाङ् ) Pho:पर्यटन ब्यावसायि जितेन्द्र झाँक्री
जिवनभर उपल्लो डोल्पाको समाजसेवा र राजनीतिको सेरोफेरोमा रहँदै आएका थिन्ले जिल्लाको चुनिन्दा नाम हो । उनले ‘क्याराभान’ चलचित्रका अलावा नेपथ्यको चर्चित गित ‘सा कर्णाली’ को म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरेका छन् । सन् २०१३ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘इकु’ मा थिन्लेलाई मुखियाको भुमिकामा देख्न सकिन्छ । त्यस्तै गरि जापानिज चलचित्र ‘एभरेष्टुः कामिगामि नो इतादाकि’ अर्थात ‘एभरेष्टः द समिट अफ द गड’ भन्ने चलचित्र पनि खेलेका छन् । कला, सँष्कृति र पर्यटनका क्षेत्रमा जति योगदान गरे त्योभन्दा बढि उनले उपल्लो डोल्पाको विकास र त्यहाँका वासिन्दाको सेवामा योगदान पु¥याएका छन् । डोल्पा अझ उपल्लो डोल्पामा मात्र सिमित नाम सन् २०१९ मा रिलिज चलचित्र क्याराभानको सफलतापछि एकाएक चर्चामा आएका थिन्ले सेलिब्रेटी बने । त्यसबेला उनीसँग कुरा गर्न फोटो खिच्न र उनका बारेमा समाचार बनाउन कयौंलाई भ्याईनभ्याई थियो ।
उनी भन्थे मलाई त झन्भटै लाग्थ्यो, “फोटो खिचाउने, कुरा गर्ने, समाचार बनाउने तर हाम्रालागी केही नगर्ने” । उनले भनेको “हाम्रालागी” डोल्पा र अझ बढि उपल्लो डोल्पाको विकासका लागि भन्ने अर्थ थियो । उनी आफुले कमाएको नाम वा पहिचान सकेजति डोल्पाको विकासमा सदुपयोग गर्न चाहन्थे । उनले भेट्नेजति ठुलाबडा(प्रधानमन्त्रीस्तर) देखि सामान्य जोजोसँग कुरा गर्थे जहिल्यै डोल्पा एकदमै दुर्गम छ, विकासमा सबैभन्दा पछाडी परेको छ, त्यसमा पनि हामी उपल्लो डोल्पावासी ‘भोटेहरु’ त झन् पछाडी परेका छौं, हाम्रो विकासका लागि काम गर्दिनुप¥यो । हामीले पनि अरुको जस्तै सेवासुविधा पाउनुप¥यो । सरकारले हामीलाई ठगेको छ । हाम्रो ठाउँ (उपल्लो डोल्पा) मा सरकारै छैन । उनको चिन्ता र चाँसो सधैं यसैमा हुन्थ्यो ।
(जन्म घर साल्दाङ् ) Pho:पर्यटन ब्यावसायि जितेन्द्र झाँक्री
आफु र आफ्नाको दैनिन्दिनको दुखकष्ट भोगेदेखेका थिन्ले जिवनभर उपल्लो डोल्पावासीको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुलि, सडक, सुरक्षा, र समृद्धीका लागि अनवरत बोलिरहे, लागिरहे । जो अनवरत आफु र आफ्नो क्षेत्रको समृद्धीमा लागिरह्यो उनै जिवनको उत्तरार्धमा क्यान्सरको रोगले ग्रसित रहे र उपचारका लागि उनले ठुलो सास्ती व्यहोर्नुप¥यो । आफन्त तथा शुभचिन्तकको सहयोगमा लामो समय उपचारका लागि काठमाडौंमा रहेर उनले क्यान्सरको उपचार गरे । उपचारपछि निको पनि भए । आखिर धेरैको कामना पनि त थियो उनी निको होउन् भनेर । निको भएर डोल्पा फर्केका थिन्ले केहि दिनको दुनै बसाईपछि आफ्नो जन्मथलो साल्दाङ्ग जाने क्रममा फोक्सुण्डो ताल जाने बाटो विचैमा आफुले चढेको घोडाबाट लडेर मृत्यु भयो । एकजना समाजसेवी अवसान भयो, विश्व चर्चित नायकको देहले यो संसार छोड्यो । बाटोमा दुर्घटनामा परी निधन भएका नायकको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौं ल्याई अन्तिम दाहसंस्कार भएको थियो ।
एक वर्ष अघि भुकम्पले थिलोथिलो पारेको नेपालीको मन अर्को वर्षको त्यहि दिन नायक थिन्लेको मृत्युले फेरी शोकमा डुबायो । मृत्युपछि उनी फेरी राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय समाचारमा एकपटक छाए, छापिए । त्यसबेला केही दिनको चर्चा र शोक पछि आज बैशाख १२, २०७७ साल अर्थात उनको दुखद निधनको चौथो वर्ष सम्म आइपुग्दा उनलाई हामीले कतिपटक सम्झ्यौं ? उनलाई सम्झेर हामीले के ग¥यौं ? वा के साँच्चै अब उनी विर्सिएकै पात्र हुन् त ? वा विश्व जगतले चिनेको उनको नाम, पहिचान र योगदानको उच्च कदर हुनेगरी केही काम भएका छन् ? भलै उनी कसैको स्मृतिमा ताजै होलान् फगत कसैका लागि, कसैका लागी प्रेरणा पनि । तर देश र समाजले उनलाई आज विर्सेको छ । हो, त्यहि विर्सिएको पात्र थिन्ले जसले डोल्पालाई विश्वमाझ मात्र नभई नेपालीहरुमाझ पनि चिनायो, आज उनैको चौथो स्मृति दिवस हो । यहि अवसर पारेर एकपटक म उनलाई सम्झन चाहन्छु । थिन्ले तिमिलाई हार्दिक श्रद्धासुमन ! तिमि हराएको यो दिन म तिमिलाई साँचो अर्थमा सम्झने देश, समाज र व्यक्ति खोजिरहेको छु । सोचिरहेको छु ।
बबिकिशोर गूरुङ ( लेखक : कर्णाली प्रदेश पर्यट बोर्ड सदस्य हुन )
उनको जन्म घर साल्दाङ्मा पुगेकाे बेलामा भेटेका पर्यटन ब्यावसायि जितेन्द्र झाँक्री